किड्नी फेल कसरी हुन्छ ? किड्नी सम्वन्धि यी ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु जानिराखौं ! - Samachar Post Dainik
किड्नीको विशेष सम्बन्ध मुटु, फे’क्सो र कलेजो सँग हुन्छ । मुख्य गरी मुटु र किड्नीले परस्पर सहयोगको साथ काम गर्ने गर्दछ ।
त्यसकारण, यदि कसैलाई मुटु रो’ग लागेको छ भने उसको किड्नी पनि विग्रन्छ । त्यसबेला त्यो व्यक्तिको रक्त’चाप उच्च हुन्छ र क्रमशः मुटु पनि दुर्बल भएर जान्छ । किडनीका रोगीहरु दिनानुदिन बढीरहेका छन् ।
बमचभलब नबिलम कि’ड्नीको सबै रोगहरु स्थायी हुँदैन । सही उपचारबाट खरा’ब किड्नी ठीक हुन सक्छ । किड्नी फेल भनेको किड्नीले आफ्नो काम नगर्नु हो । अर्थात् शरीरमा सन्तुलन कायम नहुनु हो । यसो हुँदा शरीर सुन्निन्छ तथा ब्ल’डप्रेशर बढ्छ ।
के’मिकल्स, जस्तो यू’रिया, क्रि’एटिना’इन, पोटे’शियम बढ्न थाल्दछ ।
त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ कि कि’ड्नीले काम गरिरहेको छैन । यसबाट यो पनि चल्दछ कि कि’ड्नी कति खराब भएको छ भनेर ।
आजकाल कि’ड्नी पेलको मुख्य कारण ब्ल’ड प्रे’सर, सुगर, पत्थ’री तथा धेरै पेन किलर प्रयोग गर्नाले हुने गरेको छ । तसर्थ यसबाट बच्न जरुरी छ ताकि ग’म्भीर स्थिति आउनबाट बच्न सकियोस् ।
प्रकाशित मिति २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ००:१५